» Journey-Assist - ခရီးသွားရန်သင်လိုအပ်သမျှ
ခရီး - Assist
ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်မှာသင့်အားလွတ်လပ်စွာစည်းရုံးရေးတွင်ကူညီရန်ဖြစ်သည် ခရီးသွား! ၎င်းသည်အလုပ်ဖြစ်စေ၊ အကြောင်းအရာအလည်အပတ်ခရီး, စျေးဝယ်ခရီးစဉ်, ဓာတ်ပုံခရီးစဉ် သို့မဟုတ်အပန်းဖြေရန် ရည်ရွယ်၍ ခရီးသွားပါ။ ဤတွင်သင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည့်အချက်အလက်အားလုံးကိုတွေ့လိမ့်မည်။ မှစ ဆွဲဆောင်မှုနှင့်အတူအပြန်အလှန်မြေပုံများ နှင့်အတွေ့အကြုံရှိခရီးသွား tour ည့်များ၏အကြံပေးချက်များနှင့်ဓာတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းများဖြင့်အဆုံးသတ်သည်။
အထူးသဖြင့်ဆက်သွယ်ရေးအတွက်၊ ပေါ်တယ်သည်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုပေးသည် သင့်ရဲ့ဆောင်းပါးတွေကိုထုတ်ဝေပါသင်၏အကြံဥာဏ်များနှင့်ဘဝဆိုင်ရာဟက်ကာများကိုဝေမျှပါ၊
အင်ဒိုနီးရှား (ဘာလီ ဂျာဗား)
ဤနေရာတွင်ထုတ်ဝေဆောင်းပါးများ မှတ်ပုံတင်ပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါ်တယ်မှည့်သည်များ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သင့်ဆောင်းပါး၊ ပါဝင်သည့်ဆောင်းပါးများ အသုံးဝင်သောအကြံဥာဏ်များ၊ အကြံပြုချက်များ၊ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောနေရာများ၏ဖော်ပြချက်များ၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများ နှင့်တူပစ္စည်းပစ္စယ။ ထုတ်ဝေခြင်းမပြုမီ၊ အကြောင်းအရာနှင့်သက်ဆိုင်မှုအတွက်ဆောင်းပါးများအားလုံးဖြည့်တင်းထားသည်
သင်၏ထုတ်ဝေမှုကိုဖန်တီးရန်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အကောင့်သို့သွားပါ၊ သို့မဟုတ်ပါကနှိပ်ပါ ဒီမှာ
ဗီယက်နမ် လာအိုနိုင်ငံ Таиланд
အိန္ဒိယ မော်လ်ဒိုက် ဖိလစ်ပိုင်
အင်ဒိုနီးရှား တရုတ်နိုင်ငံ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ
ကမ္ဘောဒီးယား Сингапур ဂျပန်
တူရကီနိုင်ငံ၏လှပသောဒေသ ၇ ခုမာတိကာတူရကီနိုင်ငံ၏မြေအကျယ်အဝန်း၏ ၉၇ ရာခိုင်နှုန်းသည်အာရှတိုက်တွင်ရှိပြီး၎င်း၏နယ်မြေများ၏ ၃ ရာခိုင်နှုန်းသည်အရှေ့ဥရောပရှိဘော်လကန်ကျွန်းဆွယ်တွင်တည်ရှိသည်။ ကျန်နိုင်ငံများနှင့်မတူဘဲ Bosphorus၊ Marmara ပင်လယ်နှင့် Dardanelles တို့ဖြင့်ခွဲထားသည်။ တူရကီသည်အေဂျီယန်၊ အနက်နှင့်မြေထဲပင်လယ်တို့နှင့်နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်ပြီးရှည်လျားလှပသောကမ်းရိုးတန်းရှိသည်။ အတော်များများ ...
တူရကီမှာအကောင်းဆုံး 10 ကမ်းခြေ
Top 10 တူရကီရှိကမ်းခြေမာတိကာတူရကီသည်ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုများ၊ လူများနှင့်ရှုခင်းများဖြစ်သည်။ အရှေ့ဥရောပနှင့်တစ်ဖက်တွင်အာရှနှင့်အတူတူရကီသည်အင်ပါယာများ၊ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာဆက်သွယ်မှုများနှင့်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းများ၏လွှမ်းမိုးမှုအောက်တွင်၎င်း၏ရှည်လျားသောသမိုင်းကြောင်းကိုပုံဖော်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏သဘာဝရှုခင်းများနှင့်ကမ်းရိုးတန်း ...
အကောင်းဆုံး 10 အစ္စတန်ဘူလ်ဆွဲဆောင်မှု ကြက်ဆင်
အကောင်းဆုံး 10 အစ္စတန်ဘူလ်ဆွဲဆောင်မှု မာတိကာ \_ t တူရကီနိုင်ငံသည်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်သမိုင်းကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နိုင်သည့်မြို့ဖြစ်ပြီးကမ္ဘာတဝှမ်းလုံးရှိခရီးသွားများအတွက်ကမ်းလှမ်းရန်များစွာရှိသောစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်။ Neolithic ခေတ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သောယနေ့ခေတ်အစ္စတန်ဘူလ်သည်ခေတ်မီမြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီးဗလီများ၊ ဗလီများ၊
အင်ဒိုနီးရှားရှိအကြီးဆုံးကျွန်း ၁၀ ကျွန်း
အင်ဒိုနီးရှား၏အကြီးဆုံးကျွန်း (၁၀) ခုမာတိကာအင်ဒိုနီးရှားသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးဆုံးကျွန်းအုပ်စုဖြစ်ပြီးအာရှကမ်းရိုးတန်းရှိတောတွင်းအကျယ်အဝန်း ၁၇၀၀၀ အောက်သာရှိသည်။ ကျွန်း ၅ ကျွန်းသည်ကြီးမားသောအရွယ်အစားကြောင့်အဓိကဖြစ်သည်ဟုယူဆကြပြီးကျန်ကျွန်းများကိုအင်ဒိုနီးရှားကျွန်းငယ် ၃၀ အကြားပိုင်းခြားထားသည်။ သင့်ရဲ့အာရုံကိုအင်ဒိုနီးရှားမှာအကြီးဆုံးကျွန်း ၁၀ ကျွန်းကိုတင်ပြလိုက်ပါတယ်။ တကျိပ် …
အင်ဒိုနီးရှားရှိ Lombok ကျွန်းရှိအကောင်းဆုံးကမ်းခြေ ၁၀ ခု
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရှိထိပ်တန်း Lombok ကမ်းခြေ ၁၀ ခုမာတိကာအကြောင်းပြချက်များစွာကြောင့်ခရီးသွားများသည် Lombok သို့လာရောက်ကြသည်။ သူတို့သည်သဘာဝကိုလေ့လာလိုခြင်းသို့မဟုတ်ဤမွတ်စလင်အများစုနေထိုင်သောကျွန်းအသိုင်းအဝိုင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာလိုကြပေမည်။ တချို့ကျတော့ Lombok ရဲ့အကောင်းဆုံးကမ်းခြေအချို့ကိုကြည့်ချင်သည်။ ရှိသည် ...
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံးကျွန်း ၁၀ ကျွန်း
အင်ဒိုနီးရှား၏အကောင်းဆုံးကျွန်း (၁၀) ခုမာတိကာအင်ဒိုနီးရှားသည်အိန္ဒိယနှင့်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအကြားနှင့်အီကွေတာအထက်တွင်တည်ရှိသည်။ ဒီထူးခြားတဲ့နိုင်ငံကကျွန်းပေါင်း ၁၇၀၀၀ ကျော်ရှိတယ်။ ဂျာဗား၊ ဆူမားတြားနှင့်ဘော်နီယိုကဲ့သို့သောအကျော်ကြားဆုံးကျွန်းများမှာကမ္ဘာပေါ်ရှိအကြီးဆုံးကျွန်းများဖြစ်သော်လည်းသေးငယ်သည့်ကျွန်းများကိုလည်းလည်ပတ်သင့်သည်။ မဟုတ်သော်လည်း ...
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း ယူကရိန်း ချက်သမ္မတနိုင်ငံ
ဂျာမဏီ ပြင်သစ် ဆွစ်ဇလန်
အိုင်ယာလန် ခရိုအေးရှား ဂရိနိုင်ငံ
စပိန် မွန်တီနီဂရိုး ပိုလန်
အင်္ဂလန်သို့လာရောက်ရန်ထိပ်ဆုံး 10 ဦး တည်နေရာ
အင်္ဂလန်သို့အလည်အပတ်သွားမည့်ထိပ်ဆုံးနေရာ ၁၀ ခုမာတိကာအင်္ဂလန်သည်ခရီးသွားများသည်၎င်းတို့၏ပထမဆုံးသို့မဟုတ် ၁၀၀ မြောက်ပြည်ပခရီးစဉ်သို့ ဦး တည်သည်ဖြစ်စေလည်ပတ်ရန်အလွန်ကောင်းသောနေရာဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဘာသာစကားများကိုကြားနိုင်သော်လည်းအင်္ဂလိပ်စကားပြောသူများအတွက်ဘာသာစကားအတားအဆီးမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ လူသစ်များကလိုချင်ကောင်းလိုလိမ့်မည်။
လန်ဒန်မှာလုပ်ဖို့ထိပ်တန်းအရာ 10 ဗြိတိသျှ
လန်ဒန်မှာလုပ်ဖို့ထိပ်တန်းအရာ 10 ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းမာတိကာစည်ကားလှသော၊ တက်ကြွ။ ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံသောလန်ဒန်သည်လူ ဦး ရေ ၈ သန်းရှိပြီးကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးမြို့များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးယဉ်ကျေးမှု၊ ဖက်ရှင်၊ ဘဏ္financeာရေး၊ နိုင်ငံရေးနှင့်ကုန်သွယ်ရေးမြို့တော်ဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာခရီးသွား by ည့်သည်များကမ္ဘာပေါ်တွင်လာရောက်လည်ပတ်မှုအများဆုံးမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်။ မြို့တော်၌ထင်ရှားသောအထင်ကရနေရာများစွာရှိပြီး ...
ဖင်လန်ရှိအလှဆုံးဒေသ ၆ ခု
ဖင်လန်နိုင်ငံ၏အလှပဆုံးဒေသ ၆ ခုမာတိကာကမ္ဘာပေါ်တွင်မြောက်ဘက်အစွန်ဆုံးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည့်ဖင်လန်သည်လေ့လာရန်အလွန်ကောင်းသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်ကျယ်ပြန့်သည့်သစ်တောများနှင့်မရေတွက်နိုင်သောရေကန်များရေခဲခေတ်ပြီးနောက်ရေခဲမြစ်များသည်ဒေသ၏ရှုခင်းများစွာကိုဖော်ထုတ်သည့်အချိန်တွင်ဖြစ်ပေါ်လာသည့်ရေကန်များစွာရှိသည်။ နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသော၎င်း၏ရှည်လျားသောကမ်းရိုးတန်းတွင် ...
ရိုမေးနီးယားရှိစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာနေရာ ၁၀ ခုမာတိကာဘော်ကန်ကျွန်းဆွယ်တွင်တည်ရှိသောရိုမေးနီးယားသည်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ယခင်အရှေ့တိုင်းအုပ်စုသည်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်းပြည်၏အမည်ကိုပေးခဲ့သောဟန်ဂေရီ၊ အူတိုန်နှင့်ရောမလူမျိုးများဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည်ထူးဆန်းသောမြို့ကြီးများ၊ နှင်းလျှောစီးအခွင့်အလမ်းများနှင့်ကြီးထွားလာသောတောင်ပေါ်အပန်းဖြေစခန်းများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။
ရိုမေးနီးယား၏9အလှဆုံးဒေသများ
ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံ၏လှပသောဒေသ ၉ ခုမာတိကာဥရောပအရှေ့တောင်ပိုင်းတွင်တည်ရှိသောရိုမေးနီးယားသည်ဤဒေသရှိအကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပြီးတောင်တန်းများ၊ တောင်ကုန်းများနှင့်ကျယ်ပြန့်သောလွင်ပြင်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပြီးလှပသောပင်လယ်နက်ကမ်းခြေသို့ ဦး တည်သောဒန်ညူမြစ်မှစီးဆင်းစေသည်။ အထင်ကြီးစရာကောင်းသည့်ကာပါသီယန်းများသည်တိုင်းပြည်ပိုင်နက်အထက်တွင်မြင့်တက်နေသော်လည်းအမှန်တကယ်တွင် ...
Cinque Terre ရှိလှပသောမြို့ ၅ မြို့။ အီတလီ
5 လှပသော Cinque Terre ၏မြို့များ။ အီတလီနိုင်ငံမာတိကာ Cinque Terre သည်အီတလီရှိအလှဆုံးဒေသတစ်ခုဖြစ်သည်မှာသေချာသည်။ သူ၏အနည်းဆုံးသူ၏မြို့များသို့လည်ပတ်ခြင်းသည်၎င်းကိုအတည်ပြုလိမ့်မည်။ Cinque Terre သည်ပို့စကတ်များကိုအလှဆင်ရန်ဖန်တီးထားသည်။ ၎င်း၏မြို့ ၅ မြို့သည်အီတလီအနောက်မြောက်ပိုင်းတွင်တည်ရှိပြီးမတ်စောက်သောတောင်ကုန်းများနှင့်မြေထဲပင်လယ်ကိုအပေါ်စီးကုန်းမြင့်မြင့်ကမ်းပါးများပေါ်တွင်တည်ရှိသည်။
ကင်ညာ နမီးဘီးယား တန်ဇန်းနီးယား
မော်ရိုကိုရှိထိပ်ဆုံး 10 ဦး တည်နေရာ
မော်ရိုကိုတွင်ရှိသောထိပ်ဆုံးနေရာ ၁၀ ခုမာတိကာ Humphrey Bogart နှင့် Ingrid Bergman တို့သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်သော Casablanca ကိုပေးအပ်ခဲ့ကြသော်လည်းမော်ရိုကိုတွင်လည်းဤကျော်ကြားသောမြို့ထက် ကျော်လွန်၍ မြင်နိုင်စရာများစွာရှိသည်။ ယခင်ပြင်သစ်ကိုလိုနီဟောင်းသည်ခရီးသွားများအတွက်ရှေးဟောင်းအာရပ်နှင့်ဘာဘာယဉ်ကျေးမှုများ၏ဘ ၀ များကိုပင်လယ်ကမ်းခြေ၌နေပူနွေးစေရန်အခွင့်အလမ်းပေးသည်။
အကောင်းဆုံးမော်ရိုကိုမြင်ကွင်းများနှင့်အထင်ကရနေရာများ - TripAdvisor
မော်ရိုကို၏အကောင်းဆုံးဆွဲဆောင်မှု ၁၀ ​​ခုမာတိကာမော်ရိုကို၏ကမ်းရိုးတန်းနှင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောရှုခင်းများ၊ ကမ်းခြေရှည်များ၊ ခိုင်ခံ့သောငါးဖမ်းဆိပ်ကမ်းများ၊ စိမ်းလန်းစိုပြေသောအိုအေစစ်များနှင့်မြင့်မားသော Atlas တောင်တန်းများသည်ခရီးသွားများအတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည်။ ရှေးဟောင်းအစ္စလာမ်ဗိသုကာလက်ရာများနှင့်အတူ Fez၊ Meknes နှင့် Marrakesh တို့၏citiesကရာဇ်မြို့ကြီးများကိုပေါင်းထည့်ပါ။
ထိပ်တန်းမော်ရိုကိုကမ်းခြေ ၁၀ မာတိကာမာရိုကို၏ကမ်းရိုးတန်းသည်အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာကိုအနောက်ဘက်သို့ ဖြတ်၍ မြေထဲပင်လယ်ပင်လယ်ကိုမြောက်ဘက်သို့စီးဆင်းစေသည်။ ဆိုလိုသည်မှာကြည့်ရှုရန်နှင့်ပျော်မွေ့ရန်ကမ်းခြေများစွာရှိသည်။ စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသည့်လှိုင်းလေထန်ခြင်းနှင့်ရေအားကစားဝါသနာရှင်များအတွက်စိတ်ကူးရနိုင်သောနေရာများစွာရှိသည်။
အထင်ရှားဆုံးရှေးခေတ်အီဂျစ်ဘုရားကျောင်း ၁၀ ခု
အထင်ရှားဆုံးရှေးခေတ်အီဂျစ်ဘုရားကျောင်း ၁၀ ခု အီဂျစ်မာတိကာရှေးခေတ်အီဂျစ်ဗိသုကာသမိုင်းသည်နှစ်ထောင်ချီ။ တည်ရှိသည်။ အစောဆုံးအီဂျစ်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများသည်ဘီစီ ၄ ထောင်စုနှစ်အလယ်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီးကျိုးနွံသောကျူပင်များသာဖြစ်သည်။ ရှေးခေတ်အီဂျစ်လူမျိုးများရည်ရွယ်ထားသောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်အသုံးပြုခဲ့သောနောက်ဆုံးဘုရားကျောင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၆ ရာစုတိုင်အောင်ဗိမာန်တော်အဖြစ်တည်ရှိခဲ့သည်။
နမီးဘီးယားတွင်လည်ပတ်ရန်အကောင်းဆုံးနေရာ ၁၀ ခု
နမီးဘီးယားတွင်လည်ပတ်ရန်နေရာ ၁၀ ခုမာတိကာအနောက်တောင်အာဖရိကသည် ၁၉၉၀ တွင်လွတ်လပ်ရေးရခဲ့သောဂျာမန်ကိုလိုနီဟောင်းနမီးဘီးယားနိုင်ငံဖြစ်သည်။ နမီးဘီးယားသည်စိန်လုပ်ငန်းနှင့်တံတွေးထွေးသည့်ယဉ်ကျေးမှုအပြင်လူသိများသည့်သဘာဝဆွဲဆောင်မှုများစွာကြောင့်လူသိများသည်။ သင်၏အိပ်မက်အားလပ်ရက်တွင်သင်၏စိတ်ကူးတွင်တက်ကြွသောစွန့်စားမှုများစွာပါ ၀ င်ပါက ...
ဟွန်ဒူးရပ်စ်တွင်အကောင်းဆုံးကမ်းခြေ ၁၀ ခု
ဟွန်ဒူးရပ်စ်ရှိထိပ်တန်းသဲသောင်ပြင် ၁၀ ခုမာတိကာအထူးသဖြင့်ကမ်းခြေသည်အခြားတိုင်းပြည်တွင်နေထိုင်လျှင်ကောင်းမွန်သောကမ်းခြေသည်အမြဲတမ်းကောင်းမွန်သည်။ ဗဟိုအမေရိကရှိဟွန်ဒူးရပ်စ်ကမ်းခြေများသည်သင့်ကိုစိတ်ပျက်စေမည်မဟုတ်ပါ။ ဟွန်ဒူးရပ်စ်ကမ်းခြေသည် ၇၅၀ ကီလိုမီတာ (၄၇၀ မိုင်) ရှိပြီးကုန်းမကြီးနှင့်ကာရေဘီယန်အကြားခွဲခြားထားသည်။ သငျသညျကမ်းခြေဤမျှလောက်များစွာသောနှင့်အတူသင်သေချာကြောင်းကမ်းခြေကိုရှာဖွေသေချာပါသည် ...
ဟွန်ဒူးရပ်စ်ရှိထိပ်တန်းကျွန်း ၅ ကျွန်း
ဟွန်ဒူးရပ်စ်ရှိထိပ်တန်းကျွန်း ၅ ကျွန်းမာတိကာဂွာတီမာလာ၊ အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ၊ နီကာရာဂွာ၊ ကာရစ်ဘီယံပင်လယ်နှင့်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာတို့ဝိုင်းရံထားသောဟွန်ဒူးရပ်စ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ပြည်မဟွန်ဒူးရပ်စ်တွင်များစွာကမ်းလှမ်းထားပြီး Tegucigalpa နှင့် San Pedro Sula ကဲ့သို့သောမြို့များသည်ယဉ်ကျေးမှုစင်တာများဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် Kusuko အမျိုးသားဥယျာဉ်ကဲ့သို့သောလှပသောကမ်းခြေများနှင့်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသောနေရာများလည်းရှိသည်။ သော်လည်း ...
ဘရာဇီး၏အလှဆုံးဒေသ ၅ ခု
ဘရာဇီး၏လှပသောဒေသ ၅ ခုမာတိကာဘရာဇီးသည်တောင်အမေရိကကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်တိုက်ကြီးတွင်အကြီးဆုံးနှင့်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ပဉ္စမမြောက်အကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်လူ ဦး ရေအထူထပ်ဆုံးနှင့်အကျော်ကြားဆုံးမြို့ကြီးများ၏နေရာဖြစ်သည်။ ရီယိုဒီဂျနေးရိုးလို၊ ဒီလူကြိုက်များတဲ့ကမ်းရိုးတန်းမြို့တော်ကြီးကိုလူတိုင်းမြင်ယောင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ အလှဆုံး ၅ ခု ...
အကောင်းဆုံးဘိုလီးဗီးယားမြင်ကွင်းနှင့်အထင်ကရနေရာ ၁၀ ခု - TripAdvisor
ဘိုလီးဗီးယား၏အကောင်းဆုံးဆွဲဆောင်မှု ၁၀ ​​ခုမာတိကာဘိုလီးဗီးယားသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အမြင့်ဆုံးနှင့်အဝေးဆုံးနိုင်ငံများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘိုလီးဗီးယားသည်အမေရိကရှိအခြားတိုင်းပြည်များထက်ဌာနေတိုင်းရင်းသားများနေထိုင်ရာဒေသဖြစ်သည်။ ခရီးသွားများအတွက်ဘိုလီးဗီးယားသည်နိုင်ငံစုံယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများ၊ လှပသောသဘာဝရှုခင်းများနှင့်အစွန်းရောက်သည့်စွန့်စားမှုအမျိုးမျိုးကိုပေါင်းစပ်ပေးသည်။ ငါစိတ်ကူးတယ် ...
အီကွေဒေါတွင်လည်ပတ်ရန်အကောင်းဆုံးနေရာ ၁၀ ခု
အီကွေဒေါနိုင်ငံသို့လည်ပတ်ရန်ထိပ်ဆုံးနေရာ ၁၀ ခုအီကွေဒေါနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းတွင်လည်ပတ်နေသောအီကွေတာကိုခေါ်ပြီးလူတိုင်းအတွက်တစ်ခုခုပေးသောနိုင်ငံဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ခမ်းနားထည်ဝါသောကမ်းခြေများနှင့်ကီလိုမီတာတစ်သောင်းခွဲဝေးသောကမ်းရိုးတန်းနှင့်စတင်ပြီးအင်ဒီးစ်နှင့်ကမ္ဘာ့အပြည့်စုံဆုံးမြစ်၏မြစ်ဝှမ်း၏မိုးသစ်တောများမှစတင်သည်။
ဘီလီဇ်ရှိ Top-Rated ခရီးသွား At ည့်ဆွဲဆောင်
Top 10 Belize ခရီးသွား actions ည့်ဆွဲဆောင်များမာတိကာအပူပိုင်းဒေသကမ်းခြေများ၊ သန္တာကျောက်တန်းများ၊ ဂူများဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ထူးခြားဆန်းပြားသောတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်နှင့်ကာရစ်ဘီယံသဲကန္တာရများရှိသည့်တိုင်းပြည်တစ်ခုကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ ဤနိုင်ငံ၏ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ဒုတိယအကြီးဆုံးအတားအဆီးကျောက်တန်းဖြစ်ပြီးရှေးဟောင်းဘုရားကျောင်းများ၏အပျက်အယွင်းများသည်တောတွင်းတစ်လျှောက်တွင်ပျံ့နှံ့နေသည်။ ခင်ဗျားဒီလိုတိုင်းပြည်လို့ထင်ရင် ...
ကော့စတာရီရှိစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးနေရာ ၁၀ ခု
နီကာရာဂွာနှင့်ပနားမားအကြားတည်ရှိသောကော့စတာရီကာသည်တောင်များ၊ ချိုင့်ဝှမ်းများ၊ သစ်တောများ၊ မီးတောင်များ၊ ကမ်းခြေများ၊ တစ်လျှောက်ခရီးသွားခြင်းသည်မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကိုမှလျစ်လျူရှုထားခြင်းမရှိပါ။
သြစတြေးလျနှင့် Oceania ခရီး
နယူးဇီလန်ရှိအလှပဆုံးရေကန် ၁၂ ကန်
နယူးဇီလန်နိုင်ငံ၏အလှပဆုံးရေကန် ၁၂ ခုမာတိကာသြစတြေးလျ၏အရှေ့တောင်ဘက်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာတွင်တည်ရှိပြီးနယူးဇီလန်သည်အဓိကကျွန်းနှစ်ကျွန်းနှင့်ဖွဲ့စည်းထားပြီး၎င်း၏မြင့်မားသောတောင်များနှင့်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်သဘာဝရှုခင်းများကြောင့်ကျော်ကြားသည်။ ကျွန်းပေါ်ရှိမြေအများစုသည်အမျိုးသားဥယျာဉ်များပိုင်နက်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်တောင်ဘက်ကျွန်းတစ်လျှောက်ရှိအနောက်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်ရှိ ...
30.10.2020 / REM / သြစတြေးလျနှင့် Oceania, အသစ်ကနယူးဇီလန် / မှတ်ချက် နယူးဇီလန်ရှိအလှပဆုံးရေကန် ၁၂ ကန်ပေါ်တွင်ရှိသည် အဘယ်သူမျှမ
Queenstown ကနေ7အကောင်းဆုံးနေ့ကခရီးစဉ် နယူးဇီလန်
Queenstown မှအကောင်းဆုံး ၇ ရက်ခရီးစဉ် နယူးဇီလန်မာတိကာ Queenstown သည်နယူးဇီလန်ရှိအပန်းဖြေစခန်းမြို့ငယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ၀ ါကတ္တီပူရေကန်၏ကမ်းခြေပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးဆီးနှင်းဖုံးလွှမ်းနေသောတောင်များအပေါ်တွင်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသောရှုခင်းများရှိသည်။ မကြာသေးမီက၎င်းကိုအဓိကအားဖြင့်နှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်းအဖြစ်လူသိများခဲ့သည်၊ သို့သော်ယခုအခြေအနေမှာသိသိသာသာပြောင်းလဲသွားသည်။
29.10.2020 / REM / သြစတြေးလျနှင့် Oceania, အသစ်ကနယူးဇီလန် / မှတ်ချက် Queenstown ကနေ7ရက်ခရီးစဉ်အပေါ်။ နယူးဇီလန် အဘယ်သူမျှမ
နယူးဇီလန်၏အလှဆုံးဒေသ ၁၆ ခု
နယူးဇီလန်၏အလှဆုံးဒေသ ၁၆ ခုမာတိကာကမ္ဘာပေါ်တွင်အလှပဆုံးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည့် Oceania ရှိနယူးဇီလန်သည်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသောသဘာဝဆွဲဆောင်မှုများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ မီးတောင်များနှင့်တောင်ထိပ်များသည်ရှည်လျား။ သာယာလှပသောချိုင့်ဝှမ်းများ၊ တောက်ပသောရေကန်များနှင့်မြစ်ချောင်းများနှင့်ပြည့်နှက်နေသောကမ်းရိုးတန်းအထက်တွင်မြင့်တက်လျှက်ရှိသည်။
29.10.2020 / REM / သြစတြေးလျနှင့် Oceania, အသစ်ကနယူးဇီလန် / မှတ်ချက် နယူးဇီလန်၏ 16 အလှဆုံးဒေသများပေါ်တွင် အဘယ်သူမျှမ
Napier မှာလုပ်ဖို့ 10 ပျော်စရာအမှုအရာ။ နယူးဇီလန်
Napier မှာလုပ်ဖို့ 10 ပျော်စရာအမှုအရာ။ နယူးဇီလန်မာတိကာနယူးဇီလန်၏အရှေ့ဘက်ကမ်းရိုးတန်းတွင်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကိုအပေါ်စီးမှကြည့်ရှုသည့် North Island ရှိ Napier မြို့လေးသည်သာယာလှပသောပျော်စရာအကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Napier ကို "Art Deco ၏ကမ္ဘာ့မြို့တော်" ဟုလည်းလူသိများသည်မှာထူးခြားသည့်ဗိသုကာပုံစံများကိုပြသထားသည့်အလွန့်အလွန်ကောင်းသောအဆောက်အ ဦး များနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ နောက်ထပ် ...
27.10.2020 / REM / သြစတြေးလျနှင့် Oceania, အသစ်ကနယူးဇီလန် / မှတ်ချက် Napier မှာလုပ်ဖို့စိတ်ဝင်စားဖို့အရာ 10 ကိုမှတ်တမ်းတင်။ နယူးဇီလန် အဘယ်သူမျှမ
နယ်လ်ဆင်အတွက်လုပ်ဖို့9အကောင်းဆုံးအရာ။ နယူးဇီလန်
နယ်လ်ဆင်အတွက်လုပ်ဖို့9အကောင်းဆုံးအရာ။ နယူးဇီလန်မာတိကာ Tasman ပင်လယ်ကွေ့၏ကမ်းခြေများနှင့်ဝေးကွာသောနယ်လ်ဆင်သည်နယူးဇီလန်၏ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသောလှပသောတောရိုင်းအမျိုးသားဥယျာဉ်သုံးခုဝိုင်းရံထားသည်။ ၁၈၄၁ ခုနှစ်တွင် Lord Admiral Nelson ကတည်ထောင်ခဲ့ပြီးဒီမြို့ကိုရှေးအကျဆုံးအခြေချနေထိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး၎င်းကိုအမည်ပေးခဲ့သည်။ မြို့တော်ကိုချစ်ခင်စွာဖြင့်အမည်ပြောင် ...
27.10.2020 / REM / သြစတြေးလျနှင့် Oceania, အသစ်ကနယူးဇီလန် / မှတ်ချက် နယ်လ်ဆင်အတွက်လုပ်ဖို့ထိပ်တန်း9အရာပေါ်။ နယူးဇီလန် အဘယ်သူမျှမ
အော့ကလန်ကနေ9အကောင်းဆုံးနေ့ကခရီးစဉ် နယူးဇီလန်
အော့ကလန်ကနေ9အကောင်းဆုံးနေ့ကခရီးစဉ် နယူးဇီလန်မာတိကာအော့ကလန်၊ နယူးဇီလန်၏အကြီးဆုံးမြို့သည်ကမ်းလှမ်းရန်များစွာရှိသည်။ ၎င်းသည်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးပေါ်လီနီးရှားလူ ဦး ရေနေထိုင်ရာဒေသဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုတက်ကြွသော basalt မီးတောင်များပေါ်တွင်တည်ဆောက်သည် - ကမ္ဘာပေါ်တွင်တစ်ခုတည်းသောမြို့ဖြစ်သည်။ ဒါဟာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပြတိုက်, တောင်ဘက် hemisphere အတွက်အကြီးဆုံး Marina နှင့် ...
27.10.2020 / REM / သြစတြေးလျနှင့် Oceania, အသစ်ကနယူးဇီလန် / မှတ်ချက် အော့ကလန်မှအကောင်းဆုံး ၉ ရက်ခရီးစဉ်များ။ နယူးဇီလန် အဘယ်သူမျှမ
တရုတ်နိုင်ငံ၏အလှဆုံးအမျိုးသားဥယျာဉ် ၁၂ ခု
တရုတ်နိုင်ငံ၏အလှပဆုံးအမျိုးသားဥယျာဉ် ၁၂ ခုမာတိကာအမျိုးသားဥယျာဉ်များသည်တရုတ်အကြောင်းစဉ်းစားသောအခါပထမဆုံးစိတ်ထဲပေါ်လာလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ သို့သော်ဤနိုင်ငံတွင်ထူးခြားသောအမျိုးသားဥယျာဉ် ၂၀၀ ကျော်ရှိသည်။ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းတရုတ်အစိုးရသည်အမျိုးသားဥယျာဉ်စနစ်တိုးချဲ့ရန်အစစ်အမှန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။ အဓိကအားဖြင့်လေထုညစ်ညမ်းမှုအတွက် ...
တရုတ်ပြည်အရှေ့ပိုင်းရှိအံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးနေရာ ၁၀ ခု
အရှေ့တရုတ်၏အံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးနေရာ ၁၀ ခုမာတိကာအရှေ့တရုတ်သည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ကမ္ဘာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ကြွယ်ဝသောသမိုင်းကြောင်းရှိသည်၊ အချို့မြို့များသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၆၀၀၀ ကျော်ကဖြစ်သည်။ ရာစုနှစ်များစွာကြာလျှင်တရုတ်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းသည်စိတ်ကိုသက်တောင့်သက်သာရှိစေသောသက်တောင့်သက်သာရှိသောပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကိုဖန်တီးပေးခဲ့သည်။ တရုတ်ပြည်အရှေ့ပိုင်းသည်နူးညံ့သောရွေ့လျားမှုဖြင့်ပြည့်နှက်နေသောတူးမြောင်းများဖြင့်ဖြတ်ကျော်စီးဆင်းနေသောလှပသောရေမြို့များမှ…သင်၏အာရုံအားလုံးကိုနှစ်သက်သည်။
တရုတ်ပြည်မြောက်ပိုင်းရှိအံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးနေရာ ၁၀ ခု
တရုတ်ပြည်မြောက်ပိုင်းရှိအံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးနေရာ ၁၀ ခုမာတိကာတရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသည်ကျယ်ပြန့်ပြီးကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အရွယ်အစားကြောင့်၎င်းကိုတစ်ခေါက်တည်းကြည့်။ မရနိုင်ပါ၊ သို့သော်နိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောမြင်ကွင်းများရှိသည်။ မြောက်တရုတ်သည်ပထမဆုံးအကြိမ်ခရီးသွားများအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ မြောက်တရုတ်သည်သင်တွေ့နိုင်မည့်နေရာဖြစ်သည်
တရုတ်ပြည်တောင်ပိုင်းရှိအံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးနေရာ ၁၀ ခု
၁၀ တရုတ်ပြည်တောင်ပိုင်းရှိအံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးနေရာ ၁၀ မာတိကာတရုတ်နှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည်တူညီသောမြေနေရာအကျယ်အဝန်းကိုလွှမ်းခြုံထားသော်လည်းတရုတ်နိုင်ငံတွင်လူ ဦး ရေတစ်ဘီလီယံနီးပါးရှိသည်။ ဤကျယ်ပြန့်သောတိုင်းပြည်ကိုခရီးသွားခြင်းသည်စိန်ခေါ်ချက်ဖြစ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်ကဤတိုင်းပြည်ကိုသေးငယ်သောအပိုင်းများအဖြစ်ပိုင်းခြားထားပါက ပို၍ အဆင်ပြေသွားလိမ့်မည်။
တရုတ်ပြည်ကမဟာတံတိုင်းကြီးအကြောင်းအနည်းငယ်သာသိရှိရသောအချက်များ။ ကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ်သစ် ၇ ချက်စာရင်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်ကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ်ရာတစ်ခုမှာကမ္ဘာပေါ်တွင်အကျော်ကြားဆုံးအထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်သင်မသိသေးသောအရာအနည်းငယ်ရှိကောင်းရှိနိုင်သည်။ တရုတ်ပြည်ကျေးလက်ဒေသကိုဖြတ်သန်းသွားသောမြို့ရိုးသည်အလွန်လေးနက်သည်။ မှာ…
ကျနော်တို့ရုရှား, ယူကရိန်း, ဘီလာရုစ်ကိုဖြတ်ပြီးခရီးသွားလာ
ရုရှားရှိစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည့်ခရီးသွား ၁၀ နေရာ
ရုရှားကိုစိတ်ဝင်စားသည့်ထိပ်ဆုံးနေရာ ၁၀ ခုမာတိကာကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သောရုရှားသည်ခရီးသွားများအတွက်အတွေ့အကြုံများစွာပေးသည်။ တောင်ထူထပ်သောတောင်စောင်းများအထိတောင်တက်ခြင်းမှသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှေးအကျဆုံးအိုင်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်လမ်းလျှောက်ခြင်းအထိဖြစ်သည်။ သမိုင်းဝင်နေရာများနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာပွဲများကိုနိုင်ငံ၏အဓိကမြို့ကြီးများတွင်လည်းရရှိနိုင်သည်။ သင်နယ်မြေကိုစူးစမ်းလေ့လာမယ်ဆိုရင်အရေးမကြီးဘူး ...
ရုရှားအရှေ့ဘက်ရှိအံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးနေရာ ၁၀ ခု
ရုရှားအရှေ့ဘက်ရှိအံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးနေရာ ၁၀ ခုမာတိကာရုရှားသို့သွားသော Most ည့်သည်အများစုသည်တိုင်းပြည်၏အနောက်ဘက်ခြမ်းတွင်နေထိုင်ကြသည်။ မော်စကိုနှင့်စိန့်ပီတာစဘတ်ကဲ့သို့သောမြို့များသည်ကမ်းလှမ်းရန်များစွာရှိသည်၊ သို့သော်ရုရှားအရှေ့ပိုင်းရှိအရာအားလုံးကိုလက်လွတ်မခံပါ။ ရုရှားအရှေ့ဖျားဒေသမှကြမ်းတမ်းသောသဘောသဘာဝကိုသင်စိတ်ဝင်စားပါကဤနေရာသည် ...
Omsk မှာဘာလုပ်ရမလဲ ရုရှား
Omsk မှာဘာလုပ်ရမလဲ ရုရှားမာတိကာရုရှားနိုင်ငံ၊ အနောက်ဆိုက်ဘေးရီးယား၏တောင်ဘက်ပိုင်းရှိ Irtysh မြစ်နှင့် Om ၏မြစ်လက်တက်မြစ်၏မြစ်လက်ကြားတွင် Omm သည်လူ ဦး ရေတစ်သန်းရှိသည့်မြို့ဖြစ်သည်။ Omsk ဖြစ်သည်။ မြို့အတွက်အတော်လေးသင့်တော်သည်။
ခရိုင်းမီးယား၌အနားယူခြင်းမာတိကာ - ခရိုင်းမီးယားအားလပ်ရက်အားလပ်ရက်ခရီးစဉ်ကိုမည်သည့်နေရာတွင်သုံးရမည်ကိုစဉ်းစားသောအခါပထမဆုံးစိတ်ထဲပေါ်လာသည့်အရာကဘာလဲ။ ဟုတ်ပါတယ် - ခရိုင်း! ခရိုင်းဘာလဲပထမ ဦး စွာ, ခရိုင်းကြွယ်ဝခြင်းနှင့်ဖြစ်ရပ်များသမိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဂရိ၊ ဂရိ၊ တာတာ၊ ရုရှား၊ ဆိုလိုသည်မှာသမိုင်းကြောင်းအရ - ရဲတိုက်များ၊ ရဲတိုက်များ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းများ၊
Dzhubga အပန်းဖြေစခန်း။ Krasnodar ဒေသ။ ရုရှား
Dzhubga အပန်းဖြေစခန်းကျေးရွာ။ Krasnodar ဒေသ။ Russia Contents အကျဉ်းချုပ်ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ကျွန်ုပ်သည်လူသိများသော၊ သေးငယ်သော်ငြား Dzhubga ကျေးရွာနှင့်၎င်းသည်ပင်လယ်နက်ထဲသို့စီးဝင်သောအမည်တူမြစ်၏ပျော့ပျောင်းသောမြစ်ဝှမ်းတွင်တည်ရှိသည်။ သို့ဖြစ်ရာ M-4 အဝေးပြေးလမ်းမကြီးတစ်လျှောက်ပင်လယ်နက်သို့သွားသောသူများသည်ဤကျေးရွာကို ဖြတ်၍ filter မှဖြတ်သွားသည်။ ...
Nusa Tengara ကျွန်းစု ၇ ခု။ အင်ဒိုနီးရှား
Nusa Tenggara ကျွန်းစု ၇ ခု။ အင်ဒိုနီးရှားမာတိကာ Nusa Tenggara ဟုလူသိများသောဘာလီအရှေ့ဘက်ကိုရာနှင့်ချီသောကျွန်းများသည်အင်ဒိုနီးရှားအရှေ့ပိုင်းတွင်လူကြိုက်များသောခရီးသွားနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အချို့ကျွန်းများတွင်တူညီသောလှပသောကမ်းခြေများရှိသည်။ သူတို့၏ဘာလီအိမ်နီးချင်းကို visitors ည့်သည်များဆွဲဆောင်သည်။
25.09.2020 / REM / အာရှတိုက်, အင်ဒိုနီးရှား, ဘာလီန်းကျင်ခရီးသွားလာ / မှတ်ချက် Nusa Tengar ရှိထူးခြားဆန်းပြားသောကျွန်း ၇ ကျွန်းကိုမှတ်တမ်းတင်သည်။ အင်ဒိုနီးရှား အဘယ်သူမျှမ
ဘာလီအနီးရှိအလှဆုံးကျွန်း ၁၀ ကျွန်း
၁၀ ဘာလီကျွန်းအနီးရှိလှပသောကျွန်းများမာတိကာမာကျူရီကျွန်းသည်ဘရာဇီးလ်ဖြစ်ပြီးအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏လူကြိုက်အများဆုံးခရီးစဉ်ဖြစ်သည်။ မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်သမိုင်းကိုထူးခြားဆန်းပြားသော ၀ ိညာဉ်ရေးရာယဉ်ကျေးမှုနှင့်ပေါင်းစပ်ပြီးဘာလီသို့လာရောက်သူတိုင်းအတွက်တစ်ခုခုရှိသည်။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့ကျွန်းဟာတကယ့်ကိုလှတယ်၊
25.09.2020 / REM / အာရှတိုက်, အင်ဒိုနီးရှား, ဘာလီန်းကျင်ခရီးသွားလာ / မှတ်ချက် ဘာလီအနီးရှိအလှဆုံးကျွန်း ၁၀ ကျွန်းရှိသည် အဘယ်သူမျှမ
ဘာလီရှိအကောင်းဆုံးဟိုတယ် ၁၀ လုံး
ဘာလီရှိထိပ်ဆုံးဟိုတယ် ၁၀ မာတိကာအင်ဒိုနီးရှားတွင်ဘာလီသည်အကောင်းဆုံးဟိုတယ်တစ်ခုဖြစ်သည်မှာသေချာသည်။ ကျွန်းရှိဘတ်ဂျက်ရှိသောဟိုတယ်အများစုကိုကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများအများဆုံးသွားသောကူတာတွင်တွေ့နိုင်သည်။ သို့သော်ဤစာရင်းတွင်ဘာလီရှိအကောင်းဆုံးဇိမ်ခံအပန်းဖြေစခန်းများပါဝင်သည်။ Nusa Dua၊ Seminyak နှင့် Ubud တို့တွင်တည်ရှိပြီး Ubud ဟိုတယ်များနှင့်အပန်းဖြေစခန်းများသည် ...
24.09.2020 / REM / အာရှတိုက်, အင်ဒိုနီးရှား, ဘာလီန်းကျင်ခရီးသွားလာ / မှတ်ချက် ဘာလီရှိအကောင်းဆုံးဟိုတယ် ၁၀ ခုတွင် အဘယ်သူမျှမ
ညနေ ၂ နာရီခန့်တွင် Denpasar သို့ Bali Day 1 သို့ရောက်ရှိခြင်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Bali Hyatt ဟိုတယ်ကကျွန်တော်တို့ကိုအလွန်ဖော်ရွေသောကားမောင်းသူတက္ကစီပို့ပေးခဲ့ပြီးနာရီဝက်ခန့်ကျွန်တော်တို့၏ Bali Hyatt သို့ကားမောင်းခဲ့သည်။ Sanur ကိုချက်ချင်းပဲသဘောကျတယ်။ ဒီလှပတဲ့အိမ်တွေနဲ့ဘာလီမှာရှိတဲ့ရာသီဥတုကောင်းတာပေါ့။
11.09.2020 / ကောင်းကင်တမန် / အာရှတိုက်, ဘာလီန်းကျင်ခရီးသွားလာ, ရိုးသားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း /3မှတ်ချက် ဘာလီသို့ငါတို့ခရီးစဉ်အပေါ်
ကမ္ဘာပေါ်ရှိနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်၏အလားအလာများကမ္ဘာဂြိုဟ်သည်လူသားတို့၏နှစ်စဉ်သုံးစွဲခြင်းထက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဂြိုဟ်အားအဆ ၁၅၀၀၀ ပိုသောစွမ်းအင်ကိုပေးသည်။ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်၏အဓိကအားသာချက်များမှာယေဘုယျရရှိနိုင်မှုနှင့်မကုန်ခန်းနိုင်ခြင်းနှင့်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ၏သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက်လုံခြုံမှုတို့ဖြစ်သည်။ ယနေ့အချိန်ထိနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးဓါတ်ရောင်ခြည်ထုတ်လွှတ်သည့်နည်းလမ်း (၁၀) ခုကိုတီထွင်ပြီးအသုံးပြုခဲ့သည် (အမျိုးမျိုးသောအတိုင်းအတာများ) ...
15.01.2021 / ကောင်းကင်တမန် / စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်အလက်များ, ထောကျအကူပွုသတင်းအချက်အလက်များ / မှတ်ချက် ကမ္ဘာပေါ်ရှိနေစွမ်းအင်များအတွက်အလားအလာများအပေါ် အဘယ်သူမျှမ
21.12.2020 / REM / ရေပန်းခြံများ, စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်အလက်များ / မှတ်ချက် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးမိုးလုံလေလုံရေပန်းခြံများပေါ်မှာ အဘယ်သူမျှမ
ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကြီးဆုံးတိရစ္ဆာန်ရုံ ၈ ခု
ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကြီးဆုံးအကြီးဆုံးတိရစ္ဆာန်ရုံများမာတိကာဒီတော့ဘယ်တိရစ္ဆာန်ရုံကကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးလဲ။ ဤမေးခွန်း၏အဖြေသည်“ ကြီးမားသော” ဟူသောဝေါဟာရကိုအသုံးပြုသောစံနှုန်းများပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖမ်းဆီးရမိသောမျိုးစိတ်အရေအတွက်သို့မဟုတ်တိရစ္ဆာန်ရုံစုစုပေါင်းmeasureရိယာကိုတိုင်းတာသည်။ ဒုတိယအချက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားမယ်ဆိုရင် Red McCombs တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ရုံ ...
19.12.2020 / REM / တိရစ္ဆာန်ရုံ, စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်အလက်များ, ထောကျအကူပွုသတင်းအချက်အလက်များ / မှတ်ချက် ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကြီးဆုံးတိရစ္ဆာန်ရုံ ၈ ခုကိုမှတ်တမ်းတင်ရန် အဘယ်သူမျှမ
ကမ္ဘာပေါ်ရှိစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးရဟတ်ယာဉ်လမ်းကြောင်း ၁၀ ခု
၁၀ ကမ္ဘာ့မာတိကာမှစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးရဟတ်ယာဉ်များဖြင့်စီးသည့်လမ်းကြောင်း ၁၀ ရဟတ်ယာဉ်ပျံသန်းမှုသည် visitors ည့်သည်များအားမြို့သို့မဟုတ်ဒေသတစ်ခု၏ထူးခြားသောမြင်ကွင်းကိုမြင်စေရုံသာမကစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပြီးစိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောအတွေ့အကြုံလည်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ရဟတ်ယာဉ်များလှည့်လည်ခြင်းသည်ဒေသ၏ဝေးလံခေါင်သီသောဒေသများသို့ visitors ည့်သည်များ ၀ င်ရောက်နိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဥပမာ ၇၀ ရာနှုန်းဟာဝိုင်ယီ ...
19.12.2020 / REM / စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်အလက်များ, ထောကျအကူပွုသတင်းအချက်အလက်များ / မှတ်ချက် ကမ္ဘာပေါ်ရှိစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးရဟတ်ယာဉ်လမ်းကြောင်း ၁၀ ခုတွင်ရှိသည် အဘယ်သူမျှမ
ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကျော်ကြားဆုံးနံရံ ၁၀ ခု
ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကျော်ကြားဆုံးနံရံ ၁၀ ခုမာတိကာရန်သူများနှင့်အခြားပစ်မှတ်များကိုကျော်လွှားရန်နယ်နိမိတ်များကိုသတ်မှတ်ရန်ရှေးခေတ်ကတည်းကဆောက်လုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ မကြာသေးမီကလည်းနံရံများကိုအထိမ်းအမှတ်အဆောက်အအုံများနှင့်အနုပညာအဆောက်အအုံများအဖြစ်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ သို့သော်မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်နေထိုင်ပါစေသူတို့ရပ်သည့်နေရာတိုင်းတွင်နံရံများကနံရံများကိုလွှမ်းမိုးထားသည်။
15.12.2020 / REM / စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်အလက်များ / မှတ်ချက် ကမ္ဘာပေါ်မှာအကျော်ကြားဆုံးနံရံ ၁၀ ခုပေါ်မှာ အဘယ်သူမျှမ
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ scariest တံတား ၂၅ ခု
ကမ္ဘာ့မာတိကာမှအကြောက်မက်ဖွယ်တံတား ၂၀ အနက်တံတားများသည်လမ်းတစ်လမ်းမှတစ်လမ်းသို့ကျွန်ုပ်တို့သွားသောလမ်းတွင်အတားအဆီးကိုကျော်လွှားရန်လုံခြုံစိတ်ချရသောလမ်းကိုဖန်တီးရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော်လည်းအချို့ကိုသင့်ကိုယ်ပိုင်လုံခြုံရေးအတွက်အကောင်းဆုံးရှောင်ကြဉ်သင့်သည်။ အချို့ကို ဖြတ်၍ ဒီဟာသည်လမ်းလျှောက်ရန်ဝေးသည်။
05.12.2020 / Mazalya / စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်အလက်များ / မှတ်ချက် ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကြောက်မက်ဖွယ်အကောင်းဆုံးတံတား ၂၅ ခုတွင်ရှိသည် အဘယ်သူမျှမ
သူတို့ကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုလှည့်စားနေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဟိုတယ် Booking aggregator ရဲ့သုံးသပ်ချက်များအပြင် Google Reviews service ကိုသုံးချင်တဲ့အတွေ့အကြုံကိုမျှဝေချင်ပါတယ်။ ဒီဟာကဘယ်လိုလဲ။ ဒီဆောင်းရာသီ (2020), ငါသီရိလင်္ကာသို့ပျံသန်းနှင့်ကြိုတင်ဘွတ်ကင်ဟိုတယ်၌ထိုမြို့၌နေ၏။ သုံးသပ်ချက်များ၊ ဓာတ်ပုံများနှင့်တကယ့် visitors ည့်သည်များ၏ခန့်မှန်းချက်များအရဟိုတယ်ကိုဂရုတစိုက်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ဤအချက်အလက်သည် ...
12.09.2020 / ဝတ္တု / အာရှတိုက်, Безрубрики, ဟိုတယ်များ, ရိုးသားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း /6မှတ်ချက်များ လူတိုင်းအပေါ်လိမ်ညာ
ရောမရှိအလှဆုံးအသင်းတော် ၈ ခု အီတလီ
အကောင်းဆုံး Oslo ဆွဲဆောင်မှု ၁၀ ​​ခု နော်ဝေး
နော်ဝေတွင်အလှဆုံးသစ်သားဘုရားကျောင်း ၁၀ ခု
TripAdvisor အကောင်းဆုံးနော်ဝေရှုခင်းများနှင့်အထင်ကရနေရာ ၁၀ ခု
နော်ဝေရှိအလှဆုံးအမျိုးသားဥယျာဉ် ၁၀ ခု
နော်ဝေးနိုင်ငံရှိ Lofoten ကျွန်းများ၏လှပမှုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်း
နော်ဝေတွင်အလှဆုံး fjord ၅ ခု
နော်ဝေတွင်အလှပဆုံးဒေသ ၆ ခု
ကမ္ဘာပေါ်ရှိအရှိဆုံး scariest လှေကားတစ်ခု
ပိုလန်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးအထင်ကရနေရာ ၁၀ ခု
ဂရိနိုင်ငံတွင်အများအားဖြင့် underrated အားလပ်ရက်ခရီးစဉ်
Kirillovka ။ Azov ပင်လယ်ပေါ်တွင်ငြိမ်ဝပ်စွာနေ။ ယူကရိန်း
ဂရိနိုင်ငံရှိအကြီးဆုံးကျွန်း ၁၀ ကျွန်း
၇ လှပသောအရှေ့မြောက်အာဂျီယန်ကျွန်းများ။ ဂရိ
Sporades ရှိအလှဆုံးကျွန်း ၄ ကျွန်း။ ဂရိ
Dodecanese ၏အလှဆုံးကျွန်း ၁၁ ကျွန်း ဂရိ
ဂရိနိုင်ငံရှိအကောင်းဆုံးကမ်းခြေ ၁၀ ခု
၇ အလှဆုံး Ionian ကျွန်းများ ဂရိ
Santorini ဂရိနိုင်ငံတွင်လုပ်ရန်ထိပ်ဆုံး 10 အရာ
၁၀ ကရေတေကျွန်း၏စိတ်ဝင်စားဖွယ်မြင်ကွင်းများ။ ဂရိ
Thessaloniki အကောင်းဆုံးဆွဲဆောင်မှု ၁၀ ​​ခု ဂရိ
Peloponnese တွင်စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံး ၁၀ ခု ဂရိ
အေသင်မြို့အနီးရှိ 8 enchanting ကျွန်းများ ဂရိ
Mykonos တွင်လူကြိုက်အများဆုံးဆွဲဆောင်မှု ၁၀ ဂရိ
Corfu တွင်လူကြိုက်အများဆုံးဆွဲဆောင်မှု ၁၀ ဂရိ
အကောင်းဆုံး Rhodes ဆွဲဆောင်မှု 10 ဂရိ
Meteora ရှိအထင်ကြီးလောက်သောဘုန်းကြီးကျောင်း ၆ ကျောင်း ဂရိ
ခရီးသွား country ည့်နိုင်ငံမြေပုံ
မင်းကိုမိတ်ဆက်ပေး နိုင်ငံမြေပုံညွှန်ပြခရီးသွား attractions ည့်ဆွဲဆောင်များနှင့်အခြားစိတ်ဝင်စားဖို့နှင့်အရေးကြီးသောအရာဝတ္ထုနှင့်အတူ။ မြေပုံများသည်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်သည်။ ဓာတ်ပုံများနှင့်ဆွဲဆောင်မှုဖော်ပြချက်များ၊ အထောက်အပံ့များပါရှိသည် စမတ်ရှာဖွေမှု၊ ရှာဖွေမှုရလဒ်များစီရန်နှင့်အပြည့်အ ၀ သွားလာရန်... ဆိုက်တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသော itors ည့်သည်များသည်အဆင့်မြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်မှုကိုအသုံးပြုနိုင်သည် - သင်၏ကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသားများ၊ trekking၊ လမ်းကြောင်းများထည့်ခြင်း ပြီးတော့နောက်ထပ်အများကြီးပဲ။ ဒါ့အပြင်သင့်ရဲ့စွန့်ပစ်ခြင်းမှာ ဂြိုဟ်တုမြေပုံများ, မြင့်နှင့်ကယ်ဆယ်ရေးမြေပုံများနှင့် ခန့်မှန်းထောက်ခံမှုနှင့်အတူအလုပ်လုပ်တဲ့ရာသီဥတုမြေပုံ.
အင်ဒိုနီးရှား (ဘာလီ၊ ဂျာဗား)
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ရာသီဥတုမြေပုံ + ခန့်မှန်းချက်များ
ခရီးသွားများအတွက်အသုံးဝင်သောအကြံပြုချက်များ။ ဘဝ hacks
ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးများ။ လေ၊ ပင်လယ်၊ မီးရထား၊ အော်တို ...
လေကြောင်းလိုင်းများ၏တာဝန် ဟိုအရင်တုန်းက။ လေပြေ
Photo Monetization Apps များ
14.11.2020 / မှတ်ချက် မြစ်ခရုဇ်ပေါ်မှာ အဘယ်သူမျှမ
လျှို့ဝှက်ကမ်းခြေ။ ဘာလီရှိဘက်လိုက်မှု Tugel သဲသောင်ပြင်
26.10.2020 / မှတ်ချက် လျှို့ဝှက်ချက်ကမ်းခြေပေါ်မှာ။ ဘာလီအတွက်ဘက်လိုက်မှု Tugel သဲသောင်ပြင် အဘယ်သူမျှမ
ဘာလီရှိ Sanur သဲသောင်ပြင်။ အင်ဒိုနီးရှား
25.10.2020 / မှတ်ချက် ဘာလီရှိ Sanur သဲသောင်ပြင်ပေါ်မှာ။ အင်ဒိုနီးရှား အဘယ်သူမျှမ
Bukit ပေါ်ရှိပန်ဒဝါကမ်းခြေ။ ဘာလီ
25.10.2020 / မှတ်ချက် Bukit အပေါ် Pandawa ကမ်းခြေပေါ်မှာ။ ဘာလီ အဘယ်သူမျှမ
ဘာလီရှိ Padang Padang ကမ်းခြေ။ အင်ဒိုနီးရှား
25.10.2020 / မှတ်ချက် ဘာလီကျွန်းရှိ Padang Padang ကမ်းခြေတွင်ရှိသည်။ အင်ဒိုနီးရှား အဘယ်သူမျှမ
မှိုသဲသောင်ပြင်။ Lenbongan ကျွန်း။ ဘာလီ
22.10.2020 / မှတ်ချက် မှိုသဲသောင်ပြင်ပေါ်မှာ။ Lenbongan ကျွန်း။ ဘာလီ အဘယ်သူမျှမ
ဘာလီရှိ Lembeng သဲသောင်ပြင်။ အင်ဒိုနီးရှား
22.10.2020 / မှတ်ချက် ဘာလီရှိ Lembeng သဲသောင်ပြင်ပေါ်မှာ။ အင်ဒိုနီးရှား အဘယ်သူမျှမ
Nusa Cheningan ကျွန်း, ဘာလီ။ အင်ဒိုနီးရှား
ဘာလီရှိ Menjangan ကျွန်း။ အင်ဒိုနီးရှား
Nusa Lembongan ကျွန်း။ ဘာလီ အင်ဒိုနီးရှား
Nusa Penida ကျွန်း။ ဘာလီ အင်ဒိုနီးရှား
ပွဲ - ခရီးစဉ်
ပေါင်း Journey-Assist သင်၏ Homescreen သို့